भ्यागुता टर्टराउँछन् | मझेरी डट कम
editor — Wed, 12/28/2016 - 04:20
वर्षाऋतुमा भ्यागुताहरू धेरै टर्टराउँछन् । जब शरदको उज्यालो घाम उदाउँछ तब भ्यागुताको आवाज मलिन हुन्छ । वर्षात्को रिमरिम झरीमा भ्यागुताहरू चौपट्टै कराउछन् । तर झरी थमिएपछि डोबिल्के कुवामा पानी सुक्छ त्यसपछि भ्यागुताको आवाज घट्न थाल्छ । अँझ हिउँदका चीसा रातमा त भ्यागुताको जीवन्त ध्वनि सुन्न पनि पाइँदैन । अहिले जताततै भ्यागुतामात्र कराइरहेका छन् । सत्तासुन्दरीको आङबाट मनीमांसलको रिमझिम वर्षा चुहिरेछ, भ्यागुताहरूको आङमा; अनि उनीहरू घोक्रो फुट्ने गरी टर्टराइरहेछन् । काञ्चनकामीनी स्वादले आपूरित छ उनीहरूको जीव्रो; अनि त कान खाने गरी कराइरहेछन् ।
भ्यागुताहरूको स्वभाव हो, अलिकति फोहोरै सही पानीको डोबिल्कोमा थुतुनो भिजाउन पाएपछि मानिसलाई अत्यास लाग्ने गरी कराइदिन्छन् । वर्षे झरीमा टर्टराउनुदेखि बाहेक भ्यागुताको अर्को जन्मजात स्वभाव हो, अहमूले फुल्नु । सानैमा घमण्डी भ्यागुताको कथा सुन्न खुब मजा लाग्थ्यो । तर कथाको प्रतियमान अर्थ अर्थात् व्यञ्जनात्मक अर्थ के हो ? त्यतिखेर राम्ररी थाहा पाएको थिइनँ । तर त्यो कथाका लक्षणाहरू अहिले थाहा पाउन थालेकोछु, त्यो कथाको व्यङ्ग्यार्थभाव अहिले बुझ्न थालेको छु । कथाले भन्छ –एउटा सानो कुवामा एउटा भ्यागुतो वर्षौदेखि बस्तै आएको थियो । ऊ कुवाबाट एकदिनपनि बाहिर निस्केको थिएन । ऊ कुवालाई नै संसार ठान्थ्यो । आकारमा अरु भ्यागुताभन्दा ऊ ठूलो थियो । ऊ त्यहाँको माउ भ्यागुतो भएकोले अरु भ्यागुताहरू उसका बच्चा न थिए । ऊ आफूभन्दा जान्ने, सुन्ने, माप्पाको र ठूलो संसारमा अरु कोही छैनन् भन्थ्यो । उसका कुरालाई अरु भुरा भ्यागुताले सजिलै पत्याउथे । किनभने माउ भ्यागुताको भुँडीभन्दा ठूलो भुँडी भएको अरु जीव उनीहरूले देख्न पाएका थिएनन् ।
एकदिनको कुरा हो, एउटा बाच्छो चर्दै चर्दै त्यही कुवा नजिक आइपुग्यो । दिनभरि घाँस चर्दा चर्दा ऊ खुब तिर्खाएको थियो । कुवामा सङ्लो पानी देखेर बाँच्छो त्यतातिर लम्क्यो । भुरा भ्यागुताहरूको बीचमा खलबली मच्चियो । जिन्दगीमा त्यति ठूलो भुँडी भएको प्राणाी पहिलोचोटि देखेका थिए । उनीहरूले आफ्नो माउ भ्यागुतो नै संसारको सबभन्दा ठूलो प्राणी हो भन्ने ठानेका थिए । बाँच्छोलाई देखेपछि उनीहरूको सोचाइ खण्डित भएको थियो । साना भ्यागुताहरू खलबली मच्चाउँदै कुवाभित्रको कुरमा पसे, जहाँ माउ भ्यागुतो बसेको थियो । उनीहरूले माउ भ्यागुतोलाई सुनाए, आज हाम्रो कुवामा यामानको भुँडी भएको जन्तु आएको छ । जुन तपाईभन्दा धेरै ठूलो छ । साना भ्यागुताका कुराले उसको अहम्मा धक्का लाग्यो । हतारहतार कुरबाट बाहिर निस्केर देखाओ त कहाँ छ त्यो ? भन्यो । उनीहरूले पानी प्यूँदै गरेको बाँच्छालाई देखाइदिए ।
माउ भ्यागुतोले भुरा भ्यागुतालाई हकार्दै भन्यो, नाथुको भुँडी कुन ठूलो छ र ? म त्यसकोभन्दा डबल ठूलो भुँडी बनाइदिन सक्छु । साना भ्यागुताले हेरौँ त भने । उसले सास रोकेर भुँडी फुलाउँदै गयो । फुलाउँदै गयो । बाँच्छाकोभन्दा ठूलो भुँडी बनाउनलाई फुलाउँदै जाँदा अचानक भुँडी पड्किएर कुवाभरि आन्द्राभुँडी छरिए । माउ भ्यागुतो फुलिँदा फुलिँदै मरेको घटनाले साना भ्यागुताहरू दुःखित भए ।
कथाको सांकेतिक शिक्षाले भन्छ –बढी टर्टराउृने र अहम्ले फुल्ने भ्यागुताको गति यस्तै हुन्छ । साँच्चैको भ्यागुताको कथा समाजरुपी कुवाका मनुजरुपी भ्यागुताहरूले कत्तिको बुझेका होलान् । बुझेका भएदेखि त उनीहरू चिच्याएको सुन्नु पर्ने थिएन । उनीहरूका कर्णविवर बिझाउने टर्टराहटले आतंकित हुनुपर्ने थिएन ।
अहिले भ्यागुताहरूका निरस आवाजहरूको व्याप्ती छ चारैतिर । कर्णप्रिय आवाज दिने प्राणीहरू, चराचुरुङ्गीहरू बिदा भएका छन् यहाँबाट । देशको राजनीतिमा हेर्छु सुमधुर ध्वनि निसृत गर्ने प्राणीहरू ओझेल परेका छन् । त्यहाँ तिनै अहम्मा फुल्ने प्यान्टे भ्यागुताहरूको टर्टराहट गुन्जिएको छ । शिक्षामा भ्यागुताहरूकै चर्को रजाइँ छ, साहित्यमा झन् बेमौसमी भ्यागुताहरूले चर्कोचर्को नाद फालिरहेका छन्, शासनमा प्रशासनमा भ्यागुताहरूकै बोलवाला छ । संचारदेखि भन्सारसम्म भ्यागुताहरू नै टर्टराइरहेछन् । चौतर्फी गुन्जिएको भ्यागुताहरूको आवाजले सुन्दर सुमधुर चराहरूको संगीतलाई विस्थापित गरिरहेको छ । यो अपशकुनको दृश्य हामीले कहिलेसम्म हेरिराख्नु पर्ला । अत्यास लाग्छ, वित्याँस जाग्छ ।
अनि भ्यागुताको विषयमा अर्को उखान पनि छ –तुलोमा जति नै भ्यागुता थुपारेपनि धार्नी कहिल्यै नपुग्ने भएकोले हाम्रा पूर्वजहरूले भनेका होलान् –“भ्यागुताको कहिल्यै धार्नी पुग्दैन ?”भ्यागुता धार्नी त के बिसौली, हमाली, सेर, सवासेर त के एक बोडी पनि हुन सक्तैनन् । कारण एउटा भ्यागुतो टिपेर तुलोमा हाल्यो । अर्को तुलोबाट उफ्रेर ओर्ली हाल्छ । तर के गर्नु यहाँ यतिखेर धार्नी नपुग्ने भ्यागुताकै ठूला कुरा छन्, भ्यागुताकै सानमान ठूलो छ ।
भ्यागुताकै विषयमा रचिएको अर्को उखानले म भ्यागुतो पूराण अन्त्य गर्न चाहन्छु र उखानले भन्छ –माछो माछो भ्यागुतो । हामीले लामो समयदेखि माछाको याचना गरेका हौँ । माछाको प्राप्तिमा हामीले साधना गरेका हौँ । माछाको निम्ति हामीले समाज रुपान्तरण विप्लवी योजनाहरू कोरेका हौँ । तर जति नै माछाको निम्ति आकाँक्षारत भए पनि हाम्रो भागमा अन्तिममा भ्यागुताको थुप्रो ............... !
तिम्रो अघि उदाएको जुन बिहानी छ
धक फुकाई रुने
जिन्दावाद र मुर्दावाद घन्काउँछौ कहिलेसम्म
सुखानुभूतिका, अबशेषहरु !